Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder Vatori - Phcoker
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder isiri mishonga inoshanda seyakanyanyisa, inomarara inokura hormone secretagogue, kutevedzera GH kukurudzira chiito chekuguma kwehomoni ghrelin. Yakaratidzwa kuwedzera kusunungurwa kwe, uye inobereka kuwedzerwa kwakasimba kwema plasma mahomoni akawanda anosanganisira kuwedzera hormone uye IGF-1, asi pasina kuchinja cortisol. Iko iye zvino iri pasi pekugadziriswa seyakakwanisa kurapwa kwehuwandu hwemahomoni aya, zvakadai sekukura kwehomoni inoshaya vana kana vakuru vakwegura, uye zvidzidzo zvevanhu zvakaratidza kuti kuwedzera maviri emasisita uye mapfupa emaminera emagetsi, zvichiita kuti ave nechirongwa chechivimbiso che kurapwa kwechirema kune vakwegura. MK-677 powder inoshandurawo kushandiswa kwemasabolism emafuta emuviri uye saka inogona kunge yakashandiswa mukurapa kuneta.
Kemikari Name MK-677;2-Amino-N-[(1R)-2-[1,2-dihydro-1-(methylsulfonyl)spiro[3H-indole-3,4′-piperidin]-1′-yl]-2-oxo-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl]-2-methylpropanamide methanesulfonate;
muchiso Name Ibutamoren Mesylate (MK677)
Kirasi yeMishonga MK677 poda
Molecular Wsere 624.768 g / mol
Melting Point 161 ku315ºC
Birara Point 868.9 ° c pa 760 mmhg
Skukodzera H2O: soluble5mg / mL, zvakajeka
Ibutamoren Mesylate APane Growth hormone releasing factor; inoshandura metabolism yemafuta emuviri; kuwedzera zvose musimba mashoma uye mapfupa emaminera emagetsi; inoshandura metabolism yemafuta emuviri
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0) Tsanangudzo
Ibutamoren mesylate (inozivikanwawo seibutamoren kana MK677), inokurudzira kuchengetedzwa kwekukura kwehomoni (GH) uye inowedzera insulini-yakafanana kukura kwechikonzero 1 (IGF-1).
Ibutamoren mesylate inowedzera kukura kwehomoni nemaitiro nekutevedzera chiito chehomoni ghrelin uye kusunga kune imwe ghrelin receptors (GHSR) muuropi. Yakagadzirirwa GHSR inokurudzira kukura kwehomoni kubva muuropi.
GHSR inowanika muhutano nzvimbo dzinodzora kudya, kufara, mafungiro, maitiro, zviyeuchidzo, uye cognition. Saka, tinogona kutarisira kuti ibutamoren mesylate inogona kuchinjawo mabasa aya. Zvisinei, kusvika ikozvino, zvidzidzo zvechirongwa chepiriniki zvinotsanangura chete migumisiro ibutamoren mesylate ine chido - uye sezvinotarisirwa, seghrelin, ibutamoren mesylate inowedzera iyo.
Chinhu chikuru pamusoro pebutamoren mesylate ndeyekuti inowedzera kukura kwehomhoni yehomoni nehuwandu kana kuti kwete kuwedzera kune mamwe mahomoni, akadai se cortisol. Cortisol inoderedza hutachiona hwehutachiona, inoderedza kuporesa kuronda, uye kunokanganisa kudzidza nekuyeuka, uye kazhinji hazvina kunaka kuva nehomoni iyi yakakwirira.
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0) Mechanism of Action
Ibutamoren mesylate (inozivikanwawo seibutamoren kana MK-677), inokurudzira kuchengetedzwa kwekukura kwehomoni (GH) uye inowedzera insulini-yakafanana kukura kwechikonzero 1 (IGF-1).
Kubatsira kweRw Ibamamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0)
♦ MK677 May Kubatsira neBet Density
♦ MK677 May Kubatsira Kuwedzera Musikana Kukura
♦ MK677 May Kubatsira Kuderedza Utsi Hwakanaka
♦ MK677 May Kubatsira nehope
♦ MK 677 Inogona Kuderedza Migumisiro yekukwegura
♦ MK677 Inogona Kuva Neotropic Migumisiro paBongo
Yakakurudzirwa Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0) Dosage
Kubva pakutsvakurudza, 20 kusvika ku30mg inoratidzika seyoyo yakanakisisa muyero. Kune mitsara yevanhu vanotora kupfuura 30mg yeMK677 pazuva, asi haina kubvumira mumigumisiro yakanaka. Chii chinotonyanya kukosha kudarika kuwedzerwa kwourefu hwehupenyu.
Zvakakosha zvikuru kuti MK677 inofanira kutorwa kwenguva yakareba. Iko kukura kwehomoni inofanira kuwedzera zvishoma nezvishoma mumuviri wako, izvo zvinogona kutora kusvika mavhiki mashomanana usati watanga kunzwa migumisiro.
Zvimwe zvikamu zveRaw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0)
MK677 haina kubudisa yakawanda migumisiro yevamwe vashandi vayo kuti vatarise pamusoro, asi vamwe vanhu vanogona kuva nemamwe matambudziko kuti vatarise. Vanhu vanowanzoshungurudzika kune insulin senzwi kana kuti vane chirwere cheshuga vangava pangozi kana vachitora MK677. Zviratidzo zvinosangana nemamiriro aya zvinogona kunge zvakanyanya kuwedzerwa nekushandiswa kweMK677. Ichichitaura nezvekudzidza kwakambotaurwa, vanhu vakwegura avo vaiva nemoyo wakambosvika vari pangozi yekushaya mwoyo pavanoshandisa MK677. Mune vamwe vanhu vane utano hwakanaka, hakuratiki kuva nemigumisiro inokuvadza yakave yakawanikwa, asi kutsvakurudza kwakawedzerwa nguva dzose kunoda kuvimbisa vatengi vezvo.